Fiidiyowga kujira Buug-yaraha - Qalabka Cajaa'ibka leh ee Suuqgeynta Degdegga ah Ma waxaad raadineysaa aalad suuqgeyn ku habboon oo isku dhafan fiidiyow iyo daabac si aad ganacsigaaga si deg deg ah ugu suuq geyso?
Buug-yaraha fiidiyowgu wuxuu kaa caawin doonaa inaad ku hirgeliso qorshaha noocan oo kale ah hab wax ku ool ah. Waxay ka dhigaysaa sharaxaad kooban oo sax ah ee alaabtaada, adeeggaaga, ama shirkaddaada laba dhinac - fiidiyow iyo daabac. Daabacaadda waraaqda caadiga ah ayaa caajis ka dhigi doonta dhiirrigelintaada, ama xitaa ka dhigi karta qaybta o ...
Sidee looga dhigi karaa macaamiisha inay ku bartaan buug-yaraha fiidiyowga qaab dhinac walba ah oo qoraal gaaban ah?
Buug-yaraha fiidiyowga (ogow: marka la eego mabda'a sheyga, oo sidoo kale loo yaqaan buug-yaraha elektaroonigga ah); buug-yaraha fiidiyowgu waa shey cusub oo ay ku jiraan isku-darka buug-yaraha dhaqanka iyo MP4 video player. Taasi waa in lagu daro LCD fiidiyoow fiidiyoow ah buug-yaraha dhaqameed; sidaa darteed buug-yaraha fiidiyowga ma leh oo keliya functi ...